WINDOWS7တွင် BLUETOOTH ကိုဖွင့်ဖို့ - WINDOWS ကို - 2019
Windows7ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Bluetooth ကိုဖွင့်ဖို့
နားကြပ်ထဲကနေစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet မှ - Bluetooth မှတဆင့်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုနေဆဲကျယ်ပြန့်ကြိုးမဲ့ကိရိယာများကိုမျိုးပေါင်း set ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်။ အောက်တွင်ကျနော်တို့က Windows7ကို run PCs နဲ့ laptops အပေါ်ဘလူးတုသ်-receiver ကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး module များအတွက်ယာဉ်မောင်းကို install သို့မဟုတ် update လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်စုစာအုပ်အသုံးပြုသူများထုတ်လုပ်သူများ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်ရန်လိုအပ် - ညာဘက် software ကိုအဲဒီမှာနေရာချထားဖို့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ပလက်ခံတာဝန်နှင့်အတူ desktop ကို PC များနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုအတန်ငယ်ရှုပ်ထွေး - ထိုချိတ်ဆက် devaysa ၏အတိအကျကိုနာမကိုသိနှင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာများအတွက်ယာဉ်မောင်းများအတွက်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာ device ကို၏အမည်ကိုအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည် - ကြောင်းအမှု၌, သင်ဟာ့ဒ်ဝဲအမှတ်အသားပေါ်တွင် utility ကို software ကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
Read more: device ကို ID ကိုပေါ်မောင်းသူကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို
အချို့တိကျသောကိစ္စများတွင်လည်းဒီ protocol ကိုအတူလုပ်ကိုင်ဖို့အခြား Bluetooth ကိုမန်နေဂျာသို့မဟုတ်နောက်ထပ် tools များတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ devices များ range နှင့်လိုအပ်သောအပိုဆောင်း software ကိုအလွန်အမင်းကွဲပြားခြားနားဖြစ်တယ်, ဒါသူတို့အားလုံးကိုယူဆောင်လာလက်တွေ့ဖြစ်ပါသည် - ဖြစ်ကောင်းကတိုရှီဘာဘလူးတုသ် Stack firmware ကိုလျှောက်လွှာကို install လုပ်ဖို့နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်သောအတိုရှီဘာ Laptop, ဖော်ပြထားခြင်း။
Windows7တွင် Bluetooth ကိုဖွင့်ဖို့
ပထမဦးစွာဒီ protocol ၏ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကို default အနေဖြင့် enabled ကြောင်းသတိပြုပါ - ရုံကားမောင်းသူကို install နှင့် module တစ်ခုရရှိထားပြီးပါပြီဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါ။ သို့သော် device ကိုသူ့ဟာသူမှတဆင့်ပိတ်နိုင်ပါသည် "Device Manager" ဒါမှမဟုတ် system ကိုဗန်း, ထိုသို့ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ လူအပေါင်းတို့သည်ရှေးခယျြစရာစဉ်းစားပါ။
နည်းလမ်း 1: "Device Manager"
ဘလူးတုရဲ့ module တစ်ခုကနေတဆင့်ဖြန့်ချိရန် "Device Manager" အောက်ပါအချက်များကိုလုပ်ဆောင်
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Start"ဒါကြောင့်ဖွင့်အနေအထားအတွက် Get "ကွန်ပျူတာ" နှင့်လက်ျာ mouse ကိုခလုတ်နှင့်အတူကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ကို Select လုပ်ပါ "Properties ကို".
လက်ဝဲတွင်စနစ်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ကိုပြတင်းပေါက်၌ကို item ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Device Manager".
ဟာ့ဒ်ဝဲ partition ကိုစာရင်းရှာဖွေပါ "ရေဒီယိုကဘလူးတုသ်" ထိုသို့ဖွင့်လှစ်။ အထဲတွင်ပါကတစ်ဦးတည်းသာအနေအထားဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် - ဤသူသည်သင်တို့ပါဝင်သည်ချင်သောကြိုးမဲ့ module တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုရွေးချယ်ပါ, ထိုယွမ်နှိပ်နဲ့ကို item ပေါ်တွင် Context Menu ကကလစ်အတွက် "Enable".
ယင်းစနစ်အတွက်စက္ကန့်အနည်းငယ်စစ်ဆင်ရေးသို့ device ကိုယူပါလိမ့်မယ်စောင့်ပါ။ အဲဒီမှာကွန်ပျူတာကို restart ပြန်လုပ်ဖို့မလိုအပ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အချို့ကိစ္စများတွင်ပါကလိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
Method ကို 2: System ကိုဗန်း
ဘလူးတုသ်ထည့်သွင်းဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း - ထိုဗန်းထဲတွင်နေရာသောဖြတ်လမ်းအိုင်ကွန်ကိုအသုံးပြုပါ။
အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ (သင်နှစ်ဦးစလုံးကိုစွန်ညာဘက်နိုင်ပါတယ်) နှင့်သမုတ်သောရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာ, ကိုသက်ဝင် "adapter Enable".
Done - ယခုဘလူးတုသ်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် enabled ။
သည် "Device Manager" သို့မဟုတ်စနစ်ဗန်းထဲမှာဘလူးတုသ်နဲ့တူဘာမှမရှိဘူး
ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး module တစ်ခု၏မှတ်တမ်းများအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးများအတွက်ပစ္စည်းစာရင်းထဲကပျောက်ကွယ်သွားစေခြင်းငှါပေမယ့်အထင်ရှားဆုံးယာဉ်မောင်းများ၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်တွေ့ရှိခဲ့လျှင်ဤမြင်နိုင်ပါသည်, 'Device Manager " အသံသွင်းချက် "အမည်မသိစက်ပစ္စည်း" သို့မဟုတ် "အမည်မသိစက်ပစ္စည်း"။ ရှိရာကဘလူးတုသ် module တွေများအတွက်ယာဉ်မောင်းကိုရှာဖွေသင်ယူဖို့, ကြှနျုပျတို့သညျဤလက်စွဲစာအုပ်ရဲ့အစမှာကဆိုသည်။
လက်ပ်တော့အကြောင်းမရှိ၏ပိုင်ရှင်များအထူးစီးပွားဖြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု tools များသို့မဟုတ်သော့ပေါင်းစပ်မှတဆင့်အဆက်ဖြုတ် module တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လက်ပ်တော့ Lenovo ကအတွက်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးပေါင်းစပ်ကိုက်ညီကို disable ဖွင့် / အဘို့ Fn + F5။ သင်တန်း၏, သည်အခြားထုတ်လုပ်သူများလက်ပ်တော့အဘို့အညာဘက်ကိုပေါင်းစပ်ကွဲပြားခြားနားကြလိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင်လူအပေါငျးတို့ကိုယူခဲ့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့က်ဘ်ဆိုက်မှာ F-keys ကို၏နံပါတ်, သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်ဘလူးတုသ် icon ကို၏ပုံစံအတွက်စက်ကိုအဘို့ဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်ရှိဖြစ်စေတွေ့နိုင်ပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဘလူးတုသ်အပေါ် switched မဟုတ်ပါ
ဤပြဿနာကိုလည်း OS ကိုအတွက်အမှားအယွင်းများထံမှဟာ့ဒ်ဝဲပျက်ကွက်အထိအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုး၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်။ ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုနှင့်အတူကွုံရသောအခါလုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ - မှာ PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုပြန်လည်စတင်ရန်: ကဆော့ဖ်ဝဲချို့ယွင်းရှိကွောငျးကိုဖြစ်နိုင်သမျှသည်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာ၏ RAM ကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုပြဿနာကိုပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ပါကယာဉ်မောင်းရဲ့ module တစ်ခု reinstall လုပ်ဖို့ကြိုးစားရန်လိုအပ်ပေသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါသည်:
အင်တာနက်ပေါ်ရှိ Find ဆက်ဆက်ဘလူးတုသ် adapter သင့်ရဲ့မော်ဒယ်တစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်ကားမောင်းသူသည်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာက download လုပ်ပါ။
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Device Manager" - ပြတင်းပေါက်သုံးပြီးဒီလိုလုပ်ဖို့အလွယ်ဆုံးလမ်း "Run ကို"ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သော ဦးဝင်း + R ကို။ ဒါကြောင့်မှာ command ကိုရိုက်ထည့်ပါdevmgmt.mscနှင့်စာနယ်ဇင်း "အိုကေ".
ရေဒီယိုကဘလူးတုသ်များ၏စာရင်း Find တစ်ခုကို select လုပ်ပါနှင့်ယွမ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ လာမယ့် menu မှာ, ကို select "Properties ကို".
ပြတင်းပေါက် Properties ကို tab မှာ "ယာဉ်မောင်း"။ ခလုတ်က Find "ကိုဖျက်" ထိုသို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒိုင်ယာလော့ခ်အတွက်စစ်ဆေးမှုများထားရန်လိုအပ်သည်စစ်ဆင်ရေးကိုအတည်ပြု "ဒီကိရိယာကိုများအတွက်ယာဉ်မောင်း software ကိုဖျက်ပစ်ပါ" နှင့်စာနယ်ဇင်း "အိုကေ".
သတိပေးခြင်း! သင့်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါရန်မလိုပါ!
ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာပေါ်တွင်ယခင်က loaded ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူ directory ကိုဖွင့်ပါက install လုပ်, သာထို့နောက်ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါ။
ထိုပြဿနာကိုယာဉ်မောင်း၌ရှိ၏ အကယ်. အထက်ပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကပြုပြင်တာတွေရည်ရွယ်သည်။ ဒါဟာထို့နောက်အများဆုံးဖွယ်ရှိ, ထိရောက်မှုဖြစ်ဖို့သက်သေပြလျှင်မူကား, သင်ကဟာ့ဒ်ဝဲပျက်ကွက်စက်ကိရိယာနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နေကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်သာဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှအယူခံမည်ဖြစ်သည်။
ဘလူးတုသ်ကိုဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အခြား devices ကိုမမွငျပါဘူး
သိပ်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးပျက်ကွက်ပေမယ့်ဒီအခြေအနေကိုအတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာအစီအ။ သင်လက်ခံ device ကိုရှာဖွေစေရန်လိုအပ်သည့်ထိုကဲ့သို့သောစမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်များသို့မဟုတ်အခြားကွန်ပျူတာအဖြစ်ကို PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုတက်ကြွစွာကိရိယာကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကိုအောက်ပါနည်းလမ်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုသည်:
စနစ်ဗန်းဖွင့်ပြီးပါကအတွက်ဘလူးတုသ် icon ကိုနေရာချထား။ ပေါ်မှာနှိပ်ပြီး PTP ကို ​​select "View Options ကို".
check လုပ်ထားသင့်ကြောင်း parameters တွေကို၏ပထမဦးဆုံးအမျိုးအစား - ပိတ်ပင်တားဆီးမှု "Connections ကို"အားလုံးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် check လုပ်ထားခံရဖို့ရှိပါတယ်။
မြင်ကွင်း - ထိုကွန်ပျူတာသည်မရရှိနိုင်ပါကဘလူးတုသ်-enabled devices တွေကိုအသိအမှတျမနိုငျသောကွောငျ့အရာ၏အဓိက parameter သည်။ ဒီ option ကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည် "ထောက်လှမ်းခြင်း"။ ဒါဟာ Turn နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Apply".
အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်အောင်ဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း - ကွန်ပျူတာနှင့်ပစ်မှတ် device ကိုဆက်သွယ်ကြိုးစားပါ။
အဆိုပါ PC ကို interface နဲ့ပြင်ပ option ကို devaysa ပြီးနောက် "ဘလူးတုသ်ကိရိယာများကိုဒီကွန်ပျူတာကိုရှာဖွေ Allow" ပိုကောင်းတဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကို turn off ရန်။
ကျနော်တို့က Windows 7, အဖြစ်ပြဿနာများပေါ်ပေါက်သည့်ဖြေရှင်းချက်ကို run နေတဲ့ကွန်ပျူတာကို Bluetooth ကိုထည့်သွင်း၏နည်းလမ်းများနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းနေကြပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကအောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုမမေး, အဖြေမပေးရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယို Watch: Windows 10 ကနပတပၚတင ဆမလဘ Phone Screen ပၚအငခတဆကနည (အောက်တိုဘာလ 2019).